(ENGLISH-MYANMAR) "A MESSAGE OF PEACE FOR OUR HUMANKIND” - Chùa Long Hương
Trang chủ / Thông Tin / (ENGLISH-MYANMAR) “A MESSAGE OF PEACE FOR OUR HUMANKIND”
လူသားတို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး သဝဏ်လွှာ
EACH OF US NEEDS TO CONTRIBUTE TO THE PEACE AND STABILITY
OF THIS GREEN PLANET WHERE WE LIVE
ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သော အစိမ်းရောင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘိက္ခု Thich Tue Hai
ကမ္ဘာတဝန်းမှ မိတ်ဆွေများခင်မျာ . . .
ကျွန်ုပ်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာလမ်းစဉ်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ယ္ခုလောလောဆယ်အချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများ ရင်ဆိုင်နေကြရသော ဘေးဒုက္ခတို့ကို တွေ့မြင်နေရတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်ုပ်ရဲ့အတွေးများဟာ ထိုဘေးဒုက္ခခံစားနေကြရသော လူသားအားလုံးအတွက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ မပူပင် မကြောင့်ကြမှုတွေနဲ့အတူ စွမ်းအားပြည်ဝသော မေတ္တာတို့ကို ပို့သလိုပါတယ်။
According to Buddhism, we believe that there isacontinuous, transmigrated cycle of life and death. Thus, throughout our countless birth and death cycles, ever since our Mother Earth came into existence, there has always been living beings. We further believe that all living beings, even as minuscule as bacteria, have spirituality, because they are beings that are actually living. As humans, we have forgotten the [collective] root [we share with other living beings], and thus, atrocities, killing, and harmful actions toward each other have taken place [since the very beginning]. Therefore, this world is turning grimmer day by day, and the hatred, anger and animosity of the multitudes of those living beings who have been killed permeate this entire planet. Due to their minds overfilling with resentment and vengeance, these living beings could not take rebirth inaphysical body again, and thus, they have [taken on different forms, such as] the disastrous viruses to bring death to humankind. This world, therefore, constantly has to face with one peril today, and another tomorrow, with deadly wars, natural disasters, and pandemics. These catastrophes always happen, and they are, indeed, induced by the mind of hatred and hostility of human beings themselves.
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်အရ မွေးခြင်း သေခြင်း ဘဝများစွာ အဖန်ဖန်လည်ပတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သံသရာစက်ဝန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ မရေတွက်နိုင်သော ဘဝများစွာ ကမ္ဘာကြီးစတင် ဖြစ်ပေါ်လာကထဲက သတ္တဝါတွေဟာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် သေးငယ်လှတဲ့ သတ္တဝါလေးတွေကစလို့ သက်ရှိတိုင်းမှာ ခံစားတတ်တဲ့ နာမ်တရားရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံထားကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေဟာ တခြားသက်ရှိတွေနဲ့အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံအချက်ကို မေ့နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာ့အစောပိုင်းကာလလောက်ကစလို့ အချင်းချင်း မလိုမုန်းတီးမှုတွေ၊ ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့လူသားတွေဟာ တရက်ထက်တရက် အာဃာတတွေ ပြင်းထန်လားပြီး ထိုညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခံ သတွာတွေရဲ့ တဖန် မုန်းတီးမှု၊ ရန်လိုမှု၊ လက်တုံ့ပြန်မှုတွေဟာလည်း ကမ္ဘာအနှံ့ ပြန်ပွါးလာပါတော့တယ်။ ထိုသတ္တဝါတွေရဲ့သန္တာန်မှာ မကျေမချမ်းဖြစ်မှုတွေ အငြိုးအတေးစိတ်တွေ ပြည့်နက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ဟာ သုဂတိဘဝတစ်ခုကို ပြန်လည်မရနိုင်ကြသေးပဲ လူသားတွေရဲ့အသက်ကို နှုတ်ယူဖို့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပိုးမွှားအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ ပြန်လည်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာ ကပ်ဆိုးဘေးဆိုး အမျိုးမျိုးနှင့် မကြာခန ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ ယ္ခုကဲ့သို့ လက်နက်ဘေး ရောဂါဘေး ငတ်မွတ်ဘေး စတာတွေ ဖြစ်ပွါးနေကြရတာဟာ အမှန်တကယ်တော့ လူသားတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့သန္တာန်ရှိ အမုန်းတရား အာဃာတတွေက လှုံ့ဆော်နေမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သဘာဝတရားကို ဖျက်ဆီးနေတာဟာ လူသားတွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီး လောကကြီး အစီစဉ်တကျ ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး မိမိစိတ်မိမိ စောင့်ထိန်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲက အဆိုးတရားတွေကို စီစစ်ဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဆိုးဝါးတဲ့ အငြိုးတရားတွေ၊ အမုန်းတရားတွေ၊ ဒေါသတွေ၊ လက်စားချေမှုတွေဆိုတာ ရှိလာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကျွန်ုပ်တို့ပြောလေ့ရှိတဲ့ “ ငြိမ်းအေးတဲ့စိတ် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာ “ ဆိုတာ ဖြစ်လာမှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဒီကမ္ဘာကြီးကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်ကြသူအားလုံးဟာ ငြိမ်းအေးတဲ့စိတ်ကို တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အတ္တစိတ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး သဘာဝရေမြေတောတောင်တွေကို ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ရပ်တန့်ကြရမယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကိုရော လူသားအချင်းချင်းကိုပါ သတ်ဖြတ် ညှင်းဆဲခြင်းအား အဆုံးသတ်ကြရပါ့မယ်။ ဒီလိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဝရုံးသုံးကားခေတ်ပျက်အခြေအနေမျိုးတွေ ကျွန်ုပ်တို့ ကြုံတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ ဒီပရမ်းပတာအခြေအနေတွေရဲ့ ဇာစ်မြစ်က နေရာအနှံ့ ပြန့်ကျဲနေပါပြီ။ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး အနိုင်ယူလိုကြတယ်၊ အပြစ်ပေးကြတယ်၊ အမုန်းတရားတွေနဲ့ ရန်ငြိုးတွေဟာ ကမ္ဘာအနှံ့ ပြည့်နက်နေပါတော့တယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးဟာ ဖရိုဖရဲ ကစဉ်ကလျားဘဝကနေ ဘယ်လိုလွတ်မြောက်နိုင်တော့မှာလဲ။
If we do not want to engender this unwholesome, vicious repercussion and we have the wish for our world to be in peace and happiness, then from this point onward, we must relinquish all resentment and animosity. We must begin to live withamind of love and purity, so that the electromagnetic waves of resentment and hostility no longer exist in our mind. We must genuinely generate the vibrations of love and respect, and mentally send them to the resentful, hateful living beings, so that when they are touched by our vibrations of love, they themselves would no longer have resentment and animosity. Instead, when they come in touch with others, they would make others stronger with no more illness and anxiety, by giving them health and happiness. To send out our vibrations of love to the world is something that any one of us can do.
ဒီမကောင်းတဲ့ဆိုးရွားသော ဂရက်ရိုက်မှုတွေမဖြစ်ပါပဲ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်မှုတွေရဖို့ ဆန္ဒရှိရင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ မလိုမုန်းတီး ဒေါသအာဃာတတွေကို စွန့်လွှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားနဲ့ စတင်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ထိုဒေါသအမျက်စိတ်တွေမှ ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ မနောလှုိုင်းတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သန္တာန်မှာ တည်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အမှန်တကယ်ပဲ မေတ္တာတရားနဲ့ ရိုသေလေးစားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ပြုစုပျိုးထောင်းပြီး အာဃတတွေလွှမ်းမိုးခံနေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဆီးသို့ မေတ္တာပို့လွှတ် လိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့တတွေလည်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မေတ္တာကို ထိတွေ့ခံစားရနိုင်ပြီး အမုန်းတရားတွေလျော့ပါး သွားကာ သူတို့နှင့်ပတ်သက်နေသူများကိုလည်းပဲ မေတ္တာဓာတ် တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပါလိမ့်မယ်။ လောကသားတွေငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ မေတ္တာဓာတ်မျှဝေးခြင်းပါပဲ။
ဒီနည်းအားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မေတ္တာတွေ သဘောထားကြီးမှုတွေ ကျေဇူးတရားတွေကို ရဟန်းရှင်လူ ကြီးငယ်မဟူ အတူတကွ အသီးသီး ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို ကာကွယ်ကြပါစို့။ ဒီမနောဓာတ်စွမ်းအားတွေဟာ ပကတိမျက်စိဖြင့် မမြင်ရသော်လည်း တကယ်တည်ရှိနေတဲ့ နာမ်သတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ စ်ိတ်တန်ခိုးဆိုတာ ရုပ်စွမ်းအားထက် အဆများစွာကြီးမားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ကို မည်သည့်ဘက်သို့ စေလွှတ်စေလွှတ် မနောလှိုင်းတွေဟာ စကြာဝဠာအနှံ့သို့ ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်း တချိန်းတည်းမှာပဲ မိမိတို့ရဲ့သန္တာန်က ဒေါသအာဃာတ တရားတွေကို လုံးဝရှင်းထုတ် လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကပ်ဆိုး ဘေးဆိုး ရောဂါဆိုးတွေ ချက်ချင်းပဲ အဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်သက်သက်မဟုတ်သော လောကမှာ အမှန်တည်ရှိနေမှုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ မိမိကိုမိမိ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်လား . . . ။ ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ သတ္တဝါတွေ အပေါ် ပြုမူဆောင်ရွက်နေပါလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သဘောထားက အဖျက်သဘောဆောင်နေရင် ၄င်းစိတ်က အခြားသူတွေရဲ့ အဆိုးစိတ်တွေနှင့်ဆက်စပ်သွားပြီး ဒုက္ခသုက္ခတွေ ကျွန်ုပ်တို့ဆီ ခေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ ရန်လိုအမုန်းတရားတွေမှ လုံးလုံးလျားလျား လွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင် သတ္တဝါအားလုံးနှင့် ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ကြဖို့၊ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ညှာတာထောက်ထားကြဖို့၊ အချင်းချင်း ဂရုစိုက်ပြီး အထောက်အကူပြုကြဖို့ရန်မှတစ်ပါး အခြားမရှိပါဘူး။ ထို့အပြင် ပရလောကသားတို့ အတွက်လည်း မေတ္တာတရားတွေ ထားရှိနိုင်မယ်ဆိုရင် ထိုလောကသားတွေရဲ့စိတ်သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မေတ္တာအစွမ်းကြောင့် နူးညံ့တဲ့ဘက်သို့ ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပြီး အမုန်းအငြိုးတွေလည်း လွင့်ပြယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးဟာ ချက်ချင်းဆိုသလို အေးချမ်းတည်ငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း ဒါကို မယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေက ယ္ခုလိုဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်မျှသာဖြစ်ပြီး လက်တွေ့မကျလှဘူးလို့လည်း ထင်ကြပြန်တယ်။ အမှန်တကယ်တော့ စိတ်တန်ခိုးဆိုတာ ရုပ်စွမ်းအင်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ကြီးမားပါတယ်။ စိတ်တန်ခိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်လျှင် ရုပ်စွမ်းအင်ဆိုတာ မပြောပလောက်ပါဘူး။ တကယ်လို့သာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ကို သူတစ်ပါးအပေါ် လွှမ်းမိုးတိုက်ခိုက် နှိပ်စက် လက်စားချေ အနိုင်ယူဖို့သာ ညွတ်နေမယ်ဆိုရင် သူတို့ဘက်မှလည်း ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် တဖန်ပြန်လည် အနိုင် ယူဖို့နည်းလမ်းတွေ ရှာနေမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ အကြောင်း အကျိုးဆိုတာ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ ကံသဘောတရား ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့လူသားများရဲ့စိတ်တွေ အကောင်းဘက်သို့ပြောင်းလဲသည် နှင့်တပြိုင်နက်ပဲ ကပ်ဆိုးဘေးဆိုးတွေဟာ ပပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဘာသာတရားဆိုတာတွေနောက် လိုက်ပြီးကိုးကွယ်နေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သန္တာန်မှာရှိတဲ့ သူတပါးကို ညှင်းဆဲလိုစိတ်၊ ရန်လိုစိတ်တွေကို လုံးဝဖယ်ရှားနိုင်လျှင်၊ လူသားအားလုံးနဲ့ သက်ရှိအားလုံးအပေါ် ချစ်ခင်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားလေးစားလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးမှာ နှောင်ဖွဲ့ထားတာတွေကို စွန့်လွှတ်နိုင်လျှင်၊ ငြိမ်းချမ်းမှုအတိသုခကို ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့် ဘာသာတရားအားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့နောက်လိုက် ကိုးကွယ်သူတွေကို ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ တူညီစွာပဲအကြံပြုထားပါတယ်။ သူတို့ထဲမှ အနည်းစုသာ လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံနိုင်းပြီး တဖက်မှာလည်း မုန်းတီးမှု ရန်လိုမှုတွေ တနေ့တခြား များပြားလာပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူတွေက လက်နက်တွေတီထွင်ပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်စစ်ပွဲတွေ ဖန်တီးကြပါတယ်။ အာဏာရှိသူတွေက အမြဲမပြတ်ဆိုသလို အခြားသူတွေကို ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖြိုခွဲကြတယ်။ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ဖို့အတွက် ကောက်ကျစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးကြတယ်။ သူတပါးကို ဖိနှိပ်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ သြဇာအာဏာကို သုံးကြတယ်။ ပဋိပက္ခတွေကို သန္ဓေတည်စေတာဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အန္တရာယ်ချောက်ကမ်းပါးစွန်းမှာရပ်နေပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းမှုကို တောင်းဆိုနေကြတာပါ။ ဒီလိုဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးက ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ စိုးရိမ်စိတ် ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့မှာ အမြဲရှိနေပါတယ်။ မိမိနဲ့ မိမိချစ်ခင်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းမျိုးစုံကို ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေကြတယ်။ သို့ပေမယ့် သူတို့ကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မှာလဲ။ ကြောက်မက်ဖွယ်အဖျက်စိတ်နှင့် ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သန္တာန်မှာရှိနေသမျှ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ဘယ်လိုတည်ရှိနိုင်မှာလဲ။ လူသားတွေ ဒါကို အရမ်း အလိုရှိကြပေမယ့် ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ရက်ကလေး တရက်တလေမျှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ရန်လိုမှုတွေ၊ စစ်ပွဲတွေ၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေ ပပျောက်စေဖို့အတွက် ကိုးကွယ်ရာဘာသာတွေ၊ နိုင်ငံတွေ၊ လူမျိုးတွေ ….. စတာတွေရဲ့အကြားမှာ ကွဲပြားခြားနားခြင်းတွေကို ပယ်ဖျက်ဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ လုံးဝလိုအပ်ပါတယ်။ အရမ်းအရမ်းကို လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာ ဒီကမ္ဘာမြေကြီး၊ လူသားမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ သက်ရှိသတွာတွေအားလုံးဟာ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကို လုံးဝလိုအပ်ပါတယ်။
If I can call upon the world leaders, I would hope that they can launchabig movement for mankind. They should forbid everyone to use arms to bring harm to one another. All those who are evil-minded and cause trouble and disorder to society must be incarcerated until they themselves become remorseful and repent; otherwise, they would continue to generate electromagnetic waves to cause disturbance to the collective vibrations of this society. Globally, all arms must be put away and all wars must come to an end. Deep, deep in the mind of all world leaders, there should be no more competitiveness for war. However they love themselves, they should love their subjects as such. However, they love their own children, they would love the children of their subjects as such, and thus, only if they genuinely have love for their people and for all humanity, similarly to the love they have for their own children, then everything in this world would be peaceful and stable!
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များကို ကျွန်ုပ် မေတ္တာရပ်ခံလိုရနိုင်လျှင် လူသားတွေအတွက် သူတို့တွေ လှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခု စတင်ဆောင်ရွက် ဖို့ရန် မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူတို့တွေက တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အန္တရာယ်ပေးဖို့ရန် လက်နက်ဆောင်ခြင်းကို တားမြစ်သင့်တယ်။ မကောင်းစိတ်မွေးပြီး သူတပါးကို ဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် နောင်တရသည့်အထိ အကျဉ်းချထားသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လျှင် သူတို့တွေဟာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို နှောက်ယှက်မှုတွေဖြစ်စေမယ့် ဒုစရိုက်လှိုင်းတွေ ဆက်လက်ပြီး ဖန်တီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအထိ လက်နက်တွေကို ဖယ်ရှားပြီး စစ်ပွဲအားလုံး အဆုံးသတ်ကြရမယ်။ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များအားလုံးရဲ့ ရင်ထဲအနက်ရှိုင်းဆုံးအထိ စစ်ပွဲအတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ မရှိသင့်တော့ပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ချစ်ကြသလို သူတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုလည်း ထိုနည်းတူ ချစ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကို သူတို့ချစ်ကြသလို တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သား သမီးတွေကိုလည်း ချစ်သင့်ပါတယ်။ ဤသို့အားဖြင့် သူတို့တွေသာ သူတို့ရဲ့သားသမီးများကို ချစ်ကြသလို ပြည်သူတွေရဲ့အပေါ် လူသားအားလုံးအပေါ် စစ်မှန်သောမေတ္တာနဲ့ ချစ်ကြမယ်ဆိုလျှင် ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာ ကပ်ဆိုးကြီးထဲ ကျရောက်နေပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးကြောင့် ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ပူဆွေးဗျာပါရတွေ ကြုံနေရပါတယ်။ ကူးစက်ခံရတဲ့နေရာတွေ သို့မဟုတ် သူတို့နဲ့နီးစပ်ရာနေရာတွေမှာ လူတိုင်းဟာ ကမောက်ကမဖြစ်နေကြပါတယ်။ လူတွေဟာ အကူအညီအတွက် ငိုနေကြတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူတို့ကို ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ သူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှနဲ့ အဲ့ဒီအကူအညီကို လဲကြလိမ့်မယ်။ မစဉ်းစာနိုင်လောက်တဲ့ ဝရုံးသုံးကားဖြစ်ပြီး မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေပါပဲ။ ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဝမ်းနည်းဖွယ် သေဆုံးနေကြပါတယ်။ ကျန်ရစ်သူတွေက သောကပွါးနေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ထမင်းတစ်လုပ် ဟင်းတစ်ဇွန်းတောင် မစားရဲကြတော့ပါဘူး။ ထောက်ပံ့ခြင်းတွေ လျှင်မြန်စွာလျော့နည်းလာတယ်။ သူတို့ဟာ အိမ်မှာပဲ သီးသန့် ခွဲနေရပြီး လမ်းဘက်ကို မထွက်ရဲကြတော့ဘူး။ သူတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာ သောကတွေ ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်။ သူတို့အတွက် ဘာကို ဆုပ်ကိုင်ထားရမလဲဆိုတာ မသိတော့ဘူး။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောနေရာမှာ နေနေကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သေခြင်းတရားကို မကြောက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လူသားအဖော်တွေဟာ အကြောက်တရားနဲ့ နေနေကြရတယ်။ ပရမတ်အားဖြင့် သူတို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ မကွဲပြားပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်မှုရဖို့ အခွင့်အရေးအတူ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာ ပျောက်ဆုံးနေတယ်။ အလွန်အမင် စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဟာ ဖော်မပြနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ရင်းနှလုံးသားနဲ့ လုပ်ဖို့လိုတဲ့အရာကတော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ဆီသို့ မေတ္တာဓာတ်တွေ ပို့လွှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒါကို အသွားအပြန်မရှိဘဲ အချည်းနှီးလုပ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်။ (အမှန်တကယ်ပဲ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မထားပါပဲ) အရေးတကြီးလုပ်ဖို့ရန်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လူသားအားလုံးရဲ့ပူဆွေးမှုကို အသေအချာမျှဝေခံစားဖို့ပါပဲ။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သလောက် သူတို့နဲ့မျှဝေခံစားဖို့ အသင့်ဖြစ်နေရပါ့မယ်။ သူတို့ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ကို မျှဝေရန်တောင်းဆိုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူတွေဆိုရင် တခြားသူတွေနဲ့ ဘာမမျှဝေနိုင်စရာရှိဦးမလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အခြာသူတွေနဲ့ တည်ငြိမ်မှု အေးချမ်းမှု ဖြူစင်မှုတွေကို ရိုးစင်းစွာမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အာရုံမှာပေါ်လာတဲ့လူသားအားလုံးအတွက် အရပ်ရပ်သို့ ထိုကောင်မွန်သောအရာအားလုံးကို ပို့လွှတ်သင့်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်သောက ကြောက်ရွံ့မှုတွေ သက်သာပျောက်ကင်းဖို့ အေးချမ်းတည်ငြိမ်သောနေ့ရက်တွေ မကြာမှီရောက်ရှိဖို့ ဆုတောင်းကြမယ်။
ယခုလောလောဆယ် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမှာက ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေပြီး ပထမဆုံး ကျွန်ုပ်တို့ရင်ထဲက အမုန်းတရားတွေ အာဃာတတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖယ်ထုတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ထို့နောက် ရောဂါဘေး၊ စစ်ဘေး၊ မီးဘေးစသည်တို့ကြောင့် သေဆုံးသွားသူတွေ၊ ဒုဂ္ဂတိဘုံဘဝရောက်ရှိသွားသူတွေ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်ပြီး အနှိပ်စက်ခံနေကြရသူတွေဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မေတ္တာစိတ်တွေကို ပို့လွှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမုန်းတရားတွေ ရန်လိုမှုတွေ အငြိုးတွေမပါသော စစ်မှန်သောမေတ္တာစိတ်ကို မြှုပ်နှံထားမယ်ဆိုလျှင် လက်ရှိကမ္ဘာမှာတည်ရှိနေတဲ့ သတ္တဝါတွေရဲ့ အမုန်းတရားတွေ ရန်ငြိုးတွေ အနိုင်ယူလိုမှုတွေ အားလုံးဟာ လုံးဝအရှင်းပဲ ပပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေအားလုံး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မေတ္တာကို လက်ခံရရှိနိုင်ကြပါစေ။ ထို့နောက် ဘယ်လိုချစ်ပြီး ဘယ်လိုခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတာသိပြီး အမှောင်လောကဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးတတ်သော မွေးသေသံသရာမှာ လည်စေတတ်သော အမုန်းတရားတွေ ရန်ုငြိုးတွေ လက်စားချေမှုတွေမှုက သူတို့ကို ချည်နှောင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သာ ကြီးမားတဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေ ဥာဏ်ပညာတွေ ရှိမယ်ဆိုလျှင် ယခုအချိန်မျိုးမှာ အမျက်ဒေါသထွက်နေကြသောသူများအပါအဝင် လူသား အားလုံး သတ္တဝါအားလုံးဆီသို့ ထိုစိတ်စွမ်းအားများကို ပို့လွှတ်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်တွေ နူးညံ့ကြပါစေ . . မလိုမုန်းထားတွေ မရှိတော့သည့်ထိ အချင်းချင်းခွင့်လွှတ်နိုင်ကြပါစေ . . လို ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပေးကြရအောင်လား။ အရိုးဆုံးပြောရရင် အချင်းချင်း ချစ်ကြဖို့ ခွင့်လွှတ်ကြဖို့ မြတ်နိုးကြဖို့ လေးစားကြဖို့ပေါ့။ ဒါဟာ မခက်ပါဘူး ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်လက်ထဲက အမျက်ဆိုတဲ့ဓားရှည်ကို လွှတ်ချလိုက်ရုံလေးမို့လေ။
ဒါပေမယ့် ဒါကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပါလိမ့်။ အကြောင်းကတော့ ကျွန်ုပ်တို့တွေ လူသားဆန်မှုတွေနဲ့ကင်းဝေး နေပြီး သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အကြင်နာမေတ္တာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိမနေလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ယခု ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နှလုံးသာစိ်တ်ကို ဖွင့်ကြရမယ်။ သင် ဘယ်ဘာသာကိုပဲ ကိုးကွယ်ကိုးကွယ် သင့်ဘာသာက မြင့်မြတ်သောသူတော်စင်တွေရဲ့ စိတ်စွမ်းအားကို ဆက်သွယ်ရရှိဖို့ သင့်ရဲ့ နှလုံးသားစိတ်ကို ဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ ဘုရားရှင်များနှင့် ဘုရားလောင်းများရဲ့ မေတ္တာစွမ်းအင်တွေနဲ့ တွေ့ ဆုံလိုကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အရပ်ဆယ်မျက်နှာမှ သကျမုနိဗုဒ္ဓဘုရားရှင်းများ ဘုရားအလောင်းတော်များ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ကြီးမားသော ဥာဏ်ပညာ မေတ္တာ ကရုဏာတရားတွေနှင့် အဆီအတားမရှိ ဆက်သွယ်ရရှိုနိုင်ပါရစေ . . .။ ဒီလိုဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဘုရားရှင်း များ အရိယာသူတော်စင်များကဲ့သို့ ပြည့်စုံသော ဥာဏ်ပညာနှ့င်မေတ္တာကရုဏာစွမ်းအားများ ရရှိလာမှာဖြစ်ပြီး သတ္တဝါအားလုံးဆီသို့ ထိုချစ်ခြင်း မေတ္တာများကို ပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုထိုဘုံများမှာ ရှိကြသော သတ္တဝါများအားလုံး ဒေါသအာဃာတများငြိမ်းစေရန်အလို့ငှါ ကျွန်ုပ်တို့ပို့သသော မေတ္တာများနှင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်များ၏ အကြင်နာများ လက်ခံရရှိနိုင်ကြပါစေ . . .။ ထိုသူများအားလုံး မိမိကိုယ်မိမိ ချစ်ကြသလို သူတို့ရဲ့ မိသားစုများနှင့်လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကို မလျော့သောမေတ္တာတွေနှင့် ချစ်နိုင်ကြပါစေ . . .။
ကျွန်ုပ်တို့က လူတိုင်းမှာရှိတဲ့ မွေးရာပါ ကြင်နာမှု အရင်းအမြစ်ကို (ထွန်းညှိ) နှိုးဆွပေးချင်တာပါ။ လူတိုင်းမှာ ချစ်ခင်ကြင်နာစိတ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ပင်ကိုယ်လက္ခဏာတွေကြောင့် ဒီမေတ္တာတရားဟာ အချိန်အတော်ကြာကြာ ဖုံးလွှမ်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ဒုက္ခသုက္ခတွေကို တွေးကြည့်တဲ့အခါ နှလုံးသာထဲ အတော်လေးတုန်လှုပ်မိပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သိလိုက်ရတာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အကြင်နာ မေတ္တာတရား ဖြစ်ပေါ်နိုးကြွလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တော့ အကောင်းမြင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေဖို့နဲ့ စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ စိတ်ဟာ မကျေမချမ်းဖြစ်ခြင်း ရန်လိုခြင်း အနိုင်ယူလိုစိတ်ပြင်းခြင်း အမြစ်ပြတ်ခြေမှုန်းလိုခြင်းတို့မှ ကင်းဝေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တုိ့တွေ ရန်လိုမှုတွေ ပြိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေ အမုန်းတရားတွေကို လုံးဝဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာ အရောင်တွေနဲ့တောက်ပနေမှာပါ။ အဲ့ဒီအရောင်က သတ္တဝါတွေရဲ့သန္တာန်က အမုန်းတရားအားလုံး ငြိမ်းအေးသွားစေဖို့ ဘုရားနှင့်အရိယာသူတော်စင်တွေရဲ့ စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ် စိတ်စွမ်းအားတွေနဲ့ အဆီးအတားမရှိပူးပေါင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
တည်ငြိမ်မှု(သမာဓိ)နှင့်နေထိုင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ဟာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိနေခိုက်ပါပဲ။ ဒီလောက်တိုတောင်းတဲ့ ကာလအတွင်းမှာတောင် ဘုရားနှင့် ဘုရားအလောင်းတွေ၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ဘာသာရေးစံနှုံးအရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်သွယ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်စွမ်းအင်တွေကို အရှည်တည် တန့်အောင်လုပ်ရမယ်။ ဒါမှသာ သူတို့ရဲ့ စိတ်စွမ်းအင်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ရနိုင်မယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဒီစွမ်းအင်တွေကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သတ္တဝါအားလုံးဆီကို ပို့လွှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တဝါအားလုံး ရန်လိုခြင်း မလိုမုန်းထားခြင်း ပြိုင်းဆိုင်လိုခြင်းတို့ကို ရပ်တန့်နိုင်ကြပါစေ၊ ကင်းဝေးကြပါစေ၊ မေတ္တာစွမ်းအားကိုလည်း ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ သို့မှသာ သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးပြီး ဖြူစင်သန့်ရှင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်စွမ်းအားဆိုတာ ကာလဒေသကို ကျော်လွန်ပြီး ကြီးကျယ်သောအကျိုးတရားများကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း စွမ်းအားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဆီကို စိတ်ချမ်းသာမှု ဆောင်ယူပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ သူတို့ဆီကို တိုက်ရိုက်သွားစရာ မလိုပါဘူး။ နောက်ပြီး တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူဆိုတာဟာ မှားပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ စကြာဝဠာတခွင်သို့ ခန့်ညားထည်ဝါတဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖြူစင်တဲ့ အတွင်းစိတ်မနောလှိုင်းတွေ ပို့ပေးနေတာပါပဲ။ ဒီမနောလှိုင်း မေတ္တာစွမ်းအားဆိုတာ ကစဉ်ကလျားဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကို သပ်ရပ်တောက်ပ အေးချမ်းမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အလင်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်ခွန်အားတွေကို ရိုးသားစိတ် မေတ္တာစိတ်နဲ့ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချသင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ အတွင်းသန္တာန်က အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့အရာအားလုံးကို လောကကြီးအတွက် ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်လည်းပီတိဖြစ်ရသလို ဒီလိုပေးဖို့လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်ကိုယ်ထဲ တည်းရှိနေတာ မဟုတ်ကြလို့ပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ ဒီကမ္ဘာမှာ မွေးဖွါးပြီးချိ်န်ကစလို့ ယခုထိ ကမ္ဘာကြီးကရော အခြားလူသားတွေကရော ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွန်အားတွေဖြစ်စေပြီး ကာကွယ်ပေးကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိအားလုံး ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ကျေးဇူးတရားတွေရှိပါတယ်။ ယခုလောလောဆယ် ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခင်ရတဲ့ လူသားအပေါင်းအပါတွေ ဘေးဒုက္ခတွေနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိ်န် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ထိုင်ကြည့်နေရုံ မျက်စိပိတ်ပြီး မျက်နှာလွှဲနေရုံလုပ်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အသေးအမွှားပင်ဖြစ်လင့်ကစား အနည်းဆုံး သူတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မေတ္တာတရားကို အားကိုးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အကြင်နာမေတ္တာနဲ့ ပရဟိတစိတ်တွေ မွေးမြူလိုက်ကြမယ်ဆိုလျှင် တစ်ကမ္ဘာလုံး မေတ္တာလှိုင်းတွေနဲ့ ပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကျွန်ုပ်တို့ ဒီဘဝမှာနေထိုင်စဉ်အတောအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တင်ရှိနေတဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေ နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ပေးဆပ်လိုက်နိုင်ပါပြီး။
လူတစ်ယောက်ဆိုတာ လောကလေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ အချင်းချင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေမယ်ဆိုရင် လောကကြီး တစ်ခုလုံး တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလောကကြီးနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဆိုတာ ခွဲခြားလို့မရတဲ့အရာပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်အရပ်မျက်နှာဆီသို့ပဲ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မေတ္တာလှိုင်းတွေ ပို့ပို့ ၄င်းလှိုင်းက အနန္တစကြာဝဠာအနှံ့ ပြန့်နှံ့ဆောင်းကြဉ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေက သာမာန်လူတွေဖြစ် သည့်အတွက် စိတ်တန်ခိုးလှိုင်းတွေကို မျက်မြင်မတွေ့ရလို့ ကျွန်ုပ်တို့တွေ အလဟဿ ဆုတောင်းနေကြတာလို့ ထင်ကောင်းထင်ရနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒါဟာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ကြီးမားတဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ပဲ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေခိုက် လုပ်ရမယ့်တာဝန် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သာ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားရှိတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ လူသားဆန်တဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ လူသားတွေအပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရှိသူတိုင်းမှာလည်း ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ စရဏတစ်ခုခုကို ကျင့်နေတယ်ဆိုတာဟာလည်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ကြောင့် ကျင့်နေတာမဟုတ်ပါပဲ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွါးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Thus, from the very depths of my heart, I would like to call upon everyone in the human world as [if we are starting]amovement! For those of you who have the causes and conditions to hear about this, I aspire that you would calmly settle your mind and offer to send all of your genuine affection of love and respect to the universe. Please utilize all of your mental vigor of peace and purity which you have learned and have practiced all this time. May all Buddhas and all Noble Holy Beings bear witness to our sincere heart toward our human kind during this time when everyone is undergoing apprehension and trepidation. We aspire to do something, no matter how minuscule, to dedicate to humanity. If we gainamoment of peace, then we pray that our humankind has this peace. However much quiescence, joy and serenity we have, may we share it all. May we bring all of our mental peacefulness, non-disturbance, non-resentment, all of our love and benevolence, all of our respect and gratitude, and entrust them all to the phenomenal sphere and to the furthest reach of the vast expanse of the cosmos. May all of our humankind and all living beings be interconnected with this genuine love,
in order to eradicate all animosity, competitiveness, and hatred and resentment so that the entirety of humankind can havealife of peace, joy, and unending happiness.
ဤသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်နှလုံးသားရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးတနေရာမှ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံခြင်တာက ဒါဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကို ကြာသိကြရတဲ့သူတိုင်း မိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ပြီး ကမ္ဘာကြီးအတွက် သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လေးစားမှုတွေ ဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေလို့ ကျွန်ုပ် ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ သင်လေ့ကျင့်သင်ယူထား တဲ့ ငြိမ်းချမ်းဖြူစင်မှုဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချလိုက်ပါ။ လူတိုင်း ရင်တထိတ်ထိတ် စိုးရိမ်သောကဖြစ်နေရသော ယခုအခါမျိုးမှာ ဘုရားရှင်များနှင့် အရိယာသူတော်စင်များအားလုံး လူသားများအပေါ်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စစ်မှန်သောစိတ်သဘောထားကို သက်သေပြုနိုင်ပါစေ . . .။ နည်းသည်များသည်ဖြစ်စေ လူသားများအတွက် နှစ်မြှုပ်ပြီး တခုခုပြုလုပ်ဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ တဒင်္ဂလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ ငြိမ်းအေးမှုရလျှင် ထို့အတူ လူသားများ ငြိမ်ချမ်းကြပါစေလို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပျော်ရွှင်မှုတွေ ကျွန်ုပ်တို့မှာ များများရှိသလောက် ထိုအရာများကို မျှဝေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံး ငြိမ်းချမ်းမှုအားလုံး ပရဟိတစိတ်အားလုံး ကျေးဇူးတရားများနှင့်လေးစားမှုအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပြီး ထိုအရာများအားလုံး စကြာဝဠာအနှံ့သို့ ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိပါစေ . . .။ လူသားများအားလုံး သတ္တဝါများအားလုံး ဒေါသအာဃာတများ အပြိုင်အဆိုင်များ အမုန်းတရားများမှကင်းဝေးပြီး လူ့လောကကြီးတစ်ခုလုံး အဆုံးမရှိသော ပျော်ရွှင် ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့ရန်အတွက် အချင်းချင်း စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ဆက်ဆံနိုင်ကြပါစေ . . . . . . . . . ။
In order to merge our collective praying efforts to benefit the entire world, we respectfully request all Venerables, Monks and Nuns, and Buddhists from near and far, as well as Friends from all other religions, to join us and the Sangha at Long Huong Pagoda to sit in meditation in the early morning at4a.m. and in the evening at 8 p.m. (Vietnam time zone), so that we can interconnect our electromagnetic field vibrations of light and love to bring transformation to the grim fate of our human kind and to pray for the world to soon haveafuture of lasting peace. With sincere thanks!
ကမ္ဘာ့လူသားများအားလုံး ကောင်းကျိုးတရားများရရှိခံစားနိုင်ကြစေရန်အလို့ငှါ အားလုံးစုပေါင်းပြီး ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြရန် ရဟန်းတော်များ၊ သီလရှင်ဆရာလေးများ၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ကောင်းများ၊ အခြားသော ဘာသာဝင်များပါမကျန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ လေးစားစွာ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ Long Huong ဘုရားကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးကြတဲ့ သံဃာတော်များ နံနက် ၃ : ၃၀ နာရီနှင့် ည ၇:၃၀နာရီအချိန်တွင် တရားအားထုတ်ကြရန်ဖြစ်ပြီး ဒီနည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သွားပြီး လူသားတွေကြုံတွ့နေကြရတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးတွေကိုလည်း ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းသော အနာဂါတ်ကမ္ဘာကြီးအတွက် ကိုယ်စီကြိုးစားအားထုတ်ကြပါစို့ . . . . . ။
Long Huong Pagoda – February 8, 2020
Long Huong ဘုရားကျောင်း
ဖေဖော်ဝါရီ ၈. ၂၀၂၀
17/10/2017 231 Lượt xem
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM THẺ SIÊU THOÁT ĐƯỜNG
12/01/2021 172 Lượt xem
15/05/2017 350 Lượt xem